Njalo entwasahlobo, abanikazi beziqephu zasendlini kanye nezindawo zasemadolobheni bazama ukuletha izakhi ezintsha ezakhiweni zezinto zabo, ukutshala izitshalo ezintsha. Namuhla, izinhlobo ezahlukene ze-cotoneaster zithola ukuthandwa phakathi kwabalimi. Le shrub ihlukaniswe ibe yizinhlobonhlobo eziningi futhi iyinhlanhla futhi isitshalo esivamile, kepha ngokuvamile iningi lwakhiwe umzala osetshenziswayo.
I-cotoneaster ibhekisela ezihlahleni zezitshalo. Amapheshana amancane, ayenziwe ngokuma, umbala wabo uhluka kusuka eluhlaza obumnyama (entwasahlobo nasehlobo) obomvu ngokucabangela (ekwindla). Uyathokozisa lesi sitshalo ngemifino encane ebomvu noma emhlophe, futhi izithelo zawo zifana nama-apula amancane. Ama-forefather anama-frost-resistant nesimiso esingaqinile, akhula futhi athuthuke kahle kokubili ezimweni ezinobungozi nasemadolobheni athuthukile. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo eziningi zalesi shrub zihlupha ngokuphelele emhlabathini, ngakho ziyakhula cishe yonke indawo.
Njengoba sekushiwo kakade, i-cotoneaster iboniswa yizinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo ezingatholakala kumakamelo, amapaki kanye nezikwele. Phakathi kwezinhlobo ezidume kakhulu zalesi sitshalo esihle, okushiwo kungenziwa nge-cotoneaster futhi okudliwayo, okuvamile nokumnyama okukhokhwayo, okuyizingqimba futhi okukhanyayo, okuyi-hybrid ne-Alaun. Ngokuvamile, i-shrub ayihlonishwa nje ngenxa yezimfanelo zayo zokuhlobisa, kodwa futhi ngenxa yezithelo zayo ezihlwabusayo neziwusizo. Uma ungajwayele noma iyiphi yalezi zinyoni okwamanje, kodwa ungathanda ukuhlobisa isitshalo sakho ngesitshalo esimangalisayo, bheka ikhathalogu yezihlahla ezihlobisa - ngakho uzokwazi ukuthola uhlobo oluthile lwe-cotoneaster.
Nakuba i-cotoneaster nesitshalo esingenakuzithoba, imizamo ethile yokutshala izobe isadingeka isetshenziswe, kodwa kuphela okokuqala ngemuva kokutshala. Uma isitshalo se-shrubber sijwayele futhi sihluma endaweni entsha, ukukhathazeka kwakho kuyobe kunciphise kakhulu. Kuyoba okwanele ukunikeza ukunakekelwa okudingekile, okuyinto, ngendlela, akudingi isikhathi esiningi. Cishe zonke izinhlobo, kuhlanganise ne-cotoneaster evamile, zibekezelela ngokubili izindawo ezivulekile ezikhanyayo kanye ne-penumbra. Ungakhohlwa ukusika izihlahla lapho kudingeka khona , okuyinto, ngendlela, uyayithanda kakhulu. I-Cotoneaster inganikwa noma yikuphi ukuma nokuma futhi ungesabi "inhlalakahle" yakhe. I-shrub ikhula ngokushesha. Ubusika obuvamile obusika be-cotoneaster buhlupheka, ngakho-ke ukuthatha izinyathelo zokuzivikela kusuka efrimpini akudingekile.
I-Cotoneaster ku-design landscape
Kusukela emahlathini e-cotoneaster ungakha ubuciko obuhle kusayithi lakho, vele ukhombise ingqondo encane. Isibonelo, igodi elivela ku- cotoneaster elikhanyayo liphelele ukuhlukanisa umhlaba wokuhlala ezindaweni ezithile. Akukho okukhangayo okuyizona ezitshalo ezizimele zalezi shrub, ikakhulukazi izinhlobo zayo ezivuthiwe. Ungakha futhi izingoma ezinhle, uhlanganise izinhlobo eziningana, isibonelo, i-cotoneaster evamile izokwanelisa ngokuphelele izinyoni ezinwabuzelayo, futhi ukotoneaster olunamanzi amaningi luzobonakala lukhulu ngezinhlobonhlobo zendlovu. Ngokuvamile, izinketho zokusebenzisa lesi shrub ezimangalisayo azitholakali, futhi ukunambitheka kwakho kanye nomcabango wakho kuyoba ngabacebisi abakhulu emkhakheni wokuklama.
I-Shefler. Ukunakekelwa ekhaya, ukufakelwa nokukhiqiza
Iron lomshado - lena minyaka eminingi kangaka ngomshado?
U-Kurt Wagner - ngubani lo?
Studding amathayi ngezandla zabo. amathayi igcwele ngoba ibhayisikili ngezandla zakhe
Emva kokubeletha ubuhlungu loin: izimbangela, ukwelashwa, imithi, okhalweni ibhande
Ukudweba kukaLucien Freud ngezihloko